ခါးနာခွငျးကို သကျသာစမေညျ့ အိပျစကျနညျးပုံစံမြား
HomeKnowledgeခါးနာခွငျးကို သကျသာစမေညျ့ အိပျစကျနညျးပုံစံမြား
ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ 80 ရာခိုငျနှုနျးက တဈသကျမှာ အနညျးဆုံး တဈခါတော့ ခါးနာဝဒေနာကို ခံစားရပါတယျ။ ခါးနာဝဒေနာ မဖွဈအောငျ ကွိုတငျကာကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။ အိပျစကျတဲ့ပုံစံကို ပွောငျးလိုကျရငျ ခါးနာဝဒေနာက သကျသာသှားမှာပါ။
1. လညျပငျးနှငျ့ ကြောအပျေါဘကျ နာကငျြခွငျးအတှကျ
ပကျလကျလှနျအိပျခွငျးက လညျပငျးနဲ့ ကြောအပျေါက ဖိအားတှကေို နညျးသှားစပေါတယျ။ ကြောရိုးကိုလညျး ဖွောငျ့တနျးသှားစပေါတယျ။ လညျပငျးအောကျနဲ့ ဒူးခေါငျးအောကျမှာ ခေါငျးအုံးတဈလုံးထားပွီး အိပျခွငျးက လညျပငျးနဲ့ ကြောအပျေါဘကျက နာကငျြမှုကို သကျသာစပေါတယျ။
2. ကြောရိုးမကွီးတဈလြှောကျ နာကငျြခွငျးအတှကျ
မှောကျအိပျခွငျးက ကြောရိုးတဈလြှောကျလုံး နာကငျြနတေဲ့ သူတှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။ ခေါငျးအုံးတဈအုံးကိုလညျး ဗိုကျအောကျမှာ ထားလိုကျပါ။ ခေါငျးအုံးက3လကျမထကျ မထူတဲ့ ခေါငျးအုံးအပါးလေးဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ ဗိုကျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးထားအိပျခွငျးက ကြောပျေါက ဖိအားတှကေို နညျးသှားစပေါတယျ။ ဗိုကျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးထားအိပျလို့ မသကျသာရငျ ခေါငျးအောကျက ခေါငျးအုံးကို ဖယျပွီးအိပျကွညျ့ပါ။
3. ကြောအောကျပိုငျး နာကငျြခွငျးအတှကျ
ခန်ဓာကိုယျကို တဈဖကျစောငျးပွီး အိပျတဲ့အခါ ကြောရိုးမကွီးကို သဘာဝမကတြဲ့ ပုံစံ ဖွဈစပေါတယျ။ ကြောအောကျပိုငျးကိုလညျး ကိုယျအလေးခြိနျ ပိုသှားစပေါတယျ။ ဒူးကို အနညျးငယျ ကှေးပွီး ဒူးနှဈဖကျကွားမှာ ခေါငျးအုံးတဈလုံး ထားအိပျပါ။ အဲဒီအခါ ကြောအောကျပိုငျးနာကငျြခွငျးတှေ သကျသာလာမှာဖွဈပွီး အိပျယာထတဲ့ အခါလညျး မနာတော့ပါဘူး။
ကြောအောကျပိုငျးခါးနာရငျ နောကျကိုမှီပွီး အိပျတာက ထိရောကျပါတယျ။ ခေါငျးအုံးတှကေို ကြောနဲ့ လညျပငျးနောကျမှာထားပွီး အိပျခွငျးက ခါးနာတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။ ပိုပွီး သကျတောငျ့သကျသာ ရှိဖို့ဆိုရငျ ခေါငျးအုံးတှကေို ဒူးနဲ့ ခွထေောကျအောကျမှာ ထားအိပျလို့ ရပါတယျ။
ကြောရိုးဆဈတှကွေားက အရိုးနုလှာလေးတှေ ပုံမှနျအနအေထားကနေ အနညျးငယျရှသှေ့ားရငျ နာကငျြမှုတှေ ခံစားရပါတယျ။ ကြောရိုးအဆဈတှေ ပုံမှနျအနအေထားအတိုငျး ပွနျဖွဈဖို့ ခန်ဓာကိုယျ အပျေါပိုငျးကို ကှေးပွီးအိပျပါ။ အဲဒီအခါ ကြောရိုးအဆဈတှနေဲ့ အာရုံကွောပျေါသကျရောကျနတေဲ့ ဖိအားတှေ လြော့သှားပါတယျ။
နှဈပေါငျးမြားစှာ အိပျစကျလာတဲ့ပုံစံကို ပွောငျးအိပျဖို့ ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ ခါးနာတာ မသကျသာရငျ နောကျထပျ အိပျစကျနညျးပုံစံတှေ ရှိပါတယျ။ ပုံလေးပုံထဲက ကိုယျနဲ့အဆငျပွမေယျ့ အိပျစကျနညျး ပုံစံနှဈမြိုးကို ရှေးပွီး အိပျရငျ ခါးနာသကျသာလာနိုငျပါတယျ။
ခါးနာခြင်းကို သက်သာစေမည့် အိပ်စက်နည်းပုံစံများ
ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 80 ရာခိုင်နှုန်းက တစ်သက်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ ခါးနာဝေဒနာ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အိပ်စက်တဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလိုက်ရင် ခါးနာဝေဒနာက သက်သာသွားမှာပါ။
1. လည်ပင်းနှင့် ကျောအပေါ်ဘက် နာကျင်ခြင်းအတွက်
ပက်လက်လှန်အိပ်ခြင်းက လည်ပင်းနဲ့ ကျောအပေါ်က ဖိအားတွေကို နည်းသွားစေပါတယ်။ ကျောရိုးကိုလည်း ဖြောင့်တန်းသွားစေပါတယ်။ လည်ပင်းအောက်နဲ့ ဒူးခေါင်းအောက်မှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးထားပြီး အိပ်ခြင်းက လည်ပင်းနဲ့ ကျောအပေါ်ဘက်က နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
2. ကျောရိုးမကြီးတစ်လျှောက် နာကျင်ခြင်းအတွက်
မှောက်အိပ်ခြင်းက ကျောရိုးတစ်လျှောက်လုံး နာကျင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးတစ်အုံးကိုလည်း ဗိုက်အောက်မှာ ထားလိုက်ပါ။ ခေါင်းအုံးက3လက်မထက် မထူတဲ့ ခေါင်းအုံးအပါးလေးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဗိုက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးထားအိပ်ခြင်းက ကျောပေါ်က ဖိအားတွေကို နည်းသွားစေပါတယ်။ ဗိုက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးထားအိပ်လို့ မသက်သာရင် ခေါင်းအောက်က ခေါင်းအုံးကို ဖယ်ပြီးအိပ်ကြည့်ပါ။
3. ကျောအောက်ပိုင်း နာကျင်ခြင်းအတွက်
ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ဖက်စောင်းပြီး အိပ်တဲ့အခါ ကျောရိုးမကြီးကို သဘာဝမကျတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျောအောက်ပိုင်းကိုလည်း ကိုယ်အလေးချိန် ပိုသွားစေပါတယ်။ ဒူးကို အနည်းငယ် ကွေးပြီး ဒူးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံး ထားအိပ်ပါ။ အဲဒီအခါ ကျောအောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းတွေ သက်သာလာမှာဖြစ်ပြီး အိပ်ယာထတဲ့ အခါလည်း မနာတော့ပါဘူး။
ကျောအောက်ပိုင်းခါးနာရင် နောက်ကိုမှီပြီး အိပ်တာက ထိရောက်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးတွေကို ကျောနဲ့ လည်ပင်းနောက်မှာ ထားပြီး အိပ်ခြင်းက ခါးနာတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိဖို့ဆိုရင် ခေါင်းအုံးတွေကို ဒူးနဲ့ ခြေထောက်အောက်မှာ ထားအိပ်လို့ ရပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ်တွေကြားက အရိုးနုလွှာလေးတွေ ပုံမှန်အနေအထားကနေ အနည်းငယ်ရွေ့သွားရင် နာကျင်မှုတွေ ခံစားရပါတယ်။ ကျောရိုးအဆစ်တွေ ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို ကွေးပြီးအိပ်ပါ။ အဲဒီအခါ ကျောရိုးအဆစ်တွေနဲ့ အာရုံကြောပေါ်သက်ရောက်နေတဲ့ ဖိအားတွေ လျော့သွားပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်စက်လာတဲ့ပုံစံကို ပြောင်းအိပ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ခါးနာတာ မသက်သာရင် နောက်ထပ် အိပ်စက်နည်းပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။ ပုံလေးပုံထဲက ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် အိပ်စက်နည်း ပုံစံနှစ်မျိုးကို ရွေးပြီး အိပ်ရင် ခါးနာသက်သာလာနိုင်ပါတယ်။